जिमेलको लुकेका सुविधाहरू के हुन्? ➡️ ➡️ अनुयायीहरू ➡️ ➡️
12 सक्छ, 20210टिप्पणी 385
कहिलेकाँही हामी त्यस्तो महसुस गर्छौं हामी धेरै घण्टा मेल जाँच गर्छौं र इनबक्समा भाग लिएर यो अन्य प्लेटफर्महरू र सायद जीमेलको साथ देखा पर्दछ। यद्यपि गुगलले प्रयोगकर्ताहरूलाई दोहोर्याउने कामहरू हटाउनका लागि उपकरणको साथ आफ्नो जीमेलबाट अधिक फाइदा लिनको लागि बनाएको छ।
हामी तपाईंलाई देखाउने छौं,
जिमेलको लुकेका कार्यहरू के हुन्।
तपाइँको ईमेलहरू "निन्द्रा" लाई पठाउनुहोस्: यो प्रकार्यले तपाईंलाई ईमेलहरू चयन गर्न र इनबक्स हटाउन नयाँ मितिसँग सेट गर्न अनुमति दिन्छ, जसमा इनबक्स संकेत गरिएको समयमा देखा पर्नेछ। यो गर्नको लागि तपाईंले "स्नूज" वा "स्नूज" उपकरण प्रयोग गर्नुपर्छ।
स्वयं अनुस्मारकहरू: जीमेलले ईनबक्सको शीर्षमा ईमेलहरूलाई स्वचालित रूपमा धेरै दिनसम्म फलो-अप नगरेको अवस्थामा स्थिति दिन्छ।
Gmail बाट क्यालेन्डरको साथ घटना आयोजना गर्नुहोस्: क्यालेन्डर एक गुगल अनुप्रयोग हो, जुन जीमेलको दायाँ पट्टि अवस्थित हुन्छ र तपाईंलाई घटना अनुसूची गर्न वा रिमाइन्डर चयन गर्न अनुमति दिन्छ।
विस्तृत संगठन: लेबलहरू र फिल्टरहरू प्रयोग गर्नुहोस् जुन तपाईंलाई ईमेलहरू व्यवस्थित गर्न अनुमति दिनेछ जुन एक निश्चित प्रापकबाट आउँदछन् वा विशेष शब्दको साथ उल्लेख गरिएको छ, यो स्वचालित रूपमा हुनेछ।
जीमेलले भविष्यवाणी गर्दछ तपाईले के टाइप गर्नुहुनेछ: जीमेलसँग दुई स्मार्ट सुविधाहरू छन् जुन तपाईंलाई वाक्यहरू पूर्ण गर्न अनुमति दिन्छ र आगमन सन्देशहरूको लागि प्रतिक्रियाहरू प्रदान गर्दछ। यो गर्नको लागि तपाईंले "स्मार्ट जवाफ" वा "स्मार्ट कम्पोज" प्रयोग गर्नुपर्दछ, फंक्शनहरू जसले तपाईंलाई हजारौं र अरबौं अलिखित अक्षरहरू बचत गर्दछ।
बहु ईमेल ठेगानाहरू: यदि तपाईं आफ्नो ठेगानामा कुनै संख्याको संस्करणहरू लिन चाहनुहुन्छ भने, तपाईंको ईमेल ठेगानामा अन्तिम अवधि थप्नुहोस्। उदाहरण को लागी: [ईमेल सुरक्षित] त्यो [ईमेल सुरक्षित]. O [ईमेल सुरक्षित] वा कुनै भिन्नता, जुन Google ले उही ईमेलहरू पठायो।
कीबोर्ड शर्टकटहरू: यसले तपाईंलाई समय बचत गर्न र सिधा पहुँच गर्न अनुमति दिन्छ, पप-अप बक्स प्राप्त गर्नका लागि तपाईंले थिच्नु पर्छ? र निम्न सूची देखा पर्नेछ:
Ctrl + प्रविष्ट गर्नुहोस् मतलब सन्देश पठाउनुहोस्।
Ctrl + Shift +bयसको मतलब Bcc प्राप्तकर्ताहरू थप्नुहोस्।
Ctrl + Shift + c यसको मतलब सीसी प्राप्तकर्ताहरू थप्नुहोस्।
Ctrl + अर्को विन्डोमा अग्रिमको अर्थ।
उन्नत सर्टकटहरू: योसँग निजीकृत सर्टकटको प्रकार्य छ र जब तपाईं कुराकानीलाई रद्दीटोकरीमा सार्नुहुन्न कम्पोज गर्न नयाँ विन्डो खोल्दा तिनीहरू भिन्न हुन्छन्।
यी उन्नत सेटिंग्स बनाउनको लागि तपाइँ जानु पर्छ:
सेटिंग्स चार्ट माथिल्लो दाहिने कुनामा।
सीधा पहुँचकिबोर्ड s
परिवर्तनहरू सुरक्षित गर्नुहोस
उन्नत सेटिंग्स को सूची:
/: खोज बक्समा कर्सर राख्नुहोस्
c: नयाँ सन्देश लेख्नुहोस्
d: नयाँ ट्याबमा सन्देश लेख्नुहोस्
तपाईंको सन्देशहरू जगेडा गर्नुहोस्: यदि तपाईं आफ्नो सन्देशहरूको ब्याकअप गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले ईमेल खातामा सदस्यता लिनु पर्छ जुन ब्याकअप प्रतिलिपि बनाउँदछ र तपाईंले यसलाई आफ्नो जीमेल खातामा कन्फिगर गर्नु हुन्छ, त्यसैले मैले ईमेलहरूलाई मुख्य इनबक्समा पठाउँछु।
सेटिंग्स मा जानुहोस्.
फर्वार्ड गरियो y,
त्यसपछि पुनः पठाउनुहोस् आगमन मेल को प्रतिलिपि
ठेगाना भर्नुहोस् मेल को।
1 जिमेलको लुकेका कार्यहरू के हुन्।
2 यी उन्नत सेटिंग्स बनाउनको लागि तपाइँ जानु पर्छ:
3 उन्नत सेटिंग्स को सूची:
4 निम्न गर्नुहोस्: